Bildt : Gantaalada Suuriya lagu garaacey waa jawaab cad - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bildt : Gantaalada Suuriya lagu garaacey waa jawaab cad
La daabacay fredag 7 april 2017 kl 10.02
Wallström oo canbaareysey suntii shacabka suuriya lagu buufiyey
Carl Bildt, wasiirkii hore ee arrimaha dibada. sawir: SÃ¶ren Andersson / TT
Wasiirkii horee arrimaha dibadda dalkaan Sweden Carl Bildt ayaa sheegey in weerarkii gantaalaha ee uu dalka Mareykanku habeynkii xaley ku garaacey dalka Suuriya uu ahaa jawaab cad, waana isbadal xoog leh oo ka duwan siyaasadihii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barak Obama.
Carl Bildt ayaa intaas ku darey in weerarkaani inkastoo uu yahay mid xadadan hadana uu jaahwareer galin karo xiriirka u dhexeeya quwadaha ugu waaweyn ee adduunka.
Ciidamada Mareykanka ayaa habeenkii xaley waxay gantaalo ku garaaceen garoon diyaaradeed oo lagu magacaabo Shayrat kaas oo ay gacanta ku hayaan ciidamada taageera madaxweynaha dalka Suuriya.
Garoonkaas ayaa ciidamada Mareykanku aaminsan yihiin in ay ka soo kaceen diyaaradihii gaaska sunta ah ku buufiyey dad shacab ah, weerarkaas suntana ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 80 qof usbuucaan gudihiisa.
Wasiirka arrimaha dibadda dalkaan Sweden Margot Wallström ayaa iyadoo ka faalooneysa weerarka ciidamada mareykanku ku qaadeen dalka Suuriya waxay sheegtey in aysan wali caddeyn in weerarkaas ka dib uu isbadel ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ee ku wajahan dagaalka ka oogan dalka Suuriya, waxayna wasiiraddu carrabka ku adkeysey in muhiim ay tahay in go’aan kasta oo la qaadayo lagu saleeyo xeerarka caalamiga ah ee adduunka, waxayna su’aalo iska weydiisey sida weerarka xaley dhacey uu ula jaanqaadayo xeerarka adduunka dhankaas uga yaal.
Wasiiradda ayaa intaas ku dartey in canbaareyn xoog leh u soo jeedineyso weerarkii sunta gaaska ahaa ee usbuucaan dalka Suuriya lagu laayey dad shacab ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amrey weerarkaas gantaalaha cirka ee lagu qaadey garoon ciidan oo ku yaala meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Xumus.
Wasiirkii horee arrimaha dibadda dalkaan Sweden Carl Bildt ayaa isagoo dhacdadaan ka faaloonaya , wuxuu yiri sidan soo socota.
- Iiraan aad bey arrinkaan uga carootey, waxaanuna dhowreynaa waxa uu dalka Shiinuhu arrinkaan ka yiraahdo iyo waliba raadka arrinkaani ku yeelan karo wadahadalada nabadeed ee dalka Suuriya ku saabsan.
Wasiirkii horee arrimaha dibadda dalkaan Sweden Carl Bildt.